'सेवा सुविधाका लागि जनप्रतिनिधि भएको होइन' - 761खबर.com
अध्यक्ष, मिक्लाजुङ, गाउँपालिका मोरङ
तपाईं स्थानीय तहको प्रमुख भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षको अवधिमा आफ्नो गाउँपालिकामा गरेको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ
पहिलो स्थानीय सरकार भएको हुनाले नीति नियम कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय हाम्रा अनुभवमा आएका कमी कमजोरी तथा नीति नियम बन्न नसकेको कारणले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आएता पनि सामान्यरुपमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गरिरहेको छौं । विशेष गरेर हाम्रो स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्ने सवालमा जनताको अपेक्षा ठूलो तर स्रोत साधन भने सामान्य छन् । हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थाले अति विकट छ । ८० प्रतिशत भू भाग पहाडमा रहेको, हरेक बस्तीमा आवश्यक पर्ने कँही खानेपानी छैन, कँही सडक छैन, कँही विद्युत विस्तार छैन, शिक्षकको अभाव र बिद्यालयहरुको अवस्था कमजोर छ, कँही भौतिक सुविधाहरुको पनि अभाव छ । यस्तो अभाव हुदाँ पनि हामीले यो दुईवर्षमा हामीसँग भएको स्रोत साधन, सीप, क्षमतालाई म लगायत मेरो टिमले भरपुर प्रयोग गरेर आफूले सक्दो काम तथा विकासको गतिलाई निरन्तार रुपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । हाम्रा बिषयगत समितिहरुले पनि पाएका जिम्मेवारीहरुलाई गहनताका साथ काम गरिरहेको अवस्था छ ।
सुरुमा केही कानुनी अस्पष्टताहरु पनि थिए, अब भने कानुनमा स्पष्टता आएको होला । कामहरु चाँही के के गर्नुभएको छ ?
संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । एकल अधिकारका सवालमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरुमा केही कार्यविधि तयार गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ । अहिले संघीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने कुराहरु तथा कानुन निर्माण गर्ने कुराहरुमा चाँही कतै एकल अधिकारलाई कुल्चिइएको हो कि भन्ने अवस्था छ । हाम्रो बुझाईमा पनि के रह्यो भने साझा अधिकारका सवालमा माथिल्लो सरकारबाट यसका नीतिहरु तथा कानुन बनेर आउँछन् भन्ने कुराहरु हुँदाहुँदै पनि हामीहरु आजसम्म आउँदा २३ वटा कार्यविधि बनाइसकेका छौं । त्यस्तै हाम्रा आवश्यकताहरुको पहिचान गर्नका निमित्त धेरै लागि परेर सडकको डि.पि.आर गर्ने कुराहरु, भूमि व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने कुराहरु, पर्यटकीय पर्यावरणको लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने कुराहरु हामीले गरेका छौं । त्यसैगरी सबै भन्दा पहिला तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेका छौं । मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र रहेका ६० प्रतिशत भन्दा बढि अर्गानिक जगामा बसोबास गरिरहेका घरपरिवारहरु छन् । उहाँहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा एउटा वडाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेका छौं । कति घरपरिवारहरुको अर्गानिक जग्गामा बसोबास रहेछ भन्ने तथ्याङ्ब सङ्कलन गरेर सबै वडामा निरन्तर ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रयत्नमा हामी छौं । त्यस्तै सुकुम्बासीलाई लगत दिनका लागि फारम तयार गरेर वडा कार्यलयबाट सङ्कलन गर्ने तयारी गरेका छौँ । बेरोजगारीको तथ्याङ्क लिने कुराहरु पनि हामीले गरेका छौं । सीप तथा क्षमताको पहिचान गरेर शैक्षिक बरोजगारीको लागि पनि फारम तयार पारेका छौँ ।
बेरोजगारको फारम सरकारले भनेजस्तो भत्ता दिनाको लागि हो कि अन्य प्रयोजनका लागि ?
हामीले भत्ता दिनको लागि होइन । स्थानीय तहमा बेरोजगारीको अवस्था के रहेछ र अहिले हाम्रो ठाउँमा धेरै वैदेशिक रोजगारमा जाने र भएका जमिनहरु बाँजो रहने अवस्था आएको छ, उहाँहरुसँग के सीप छ, के का लागि जाने भन्ने जस्ता कुराको अन्तर्क्रिया गरेर हामीले एउटा डाटा सङ्कलन गर्ने र यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले यस्तो कार्य गरेको हो । भत्ता दिनाको लागि होइन ।
तपाईं निर्वाचित भएको २ वर्ष पग्न लाग्यो अब जनताले परिणाम माग्ने समय पनि भयो, आफ्नो कार्यकाल भित्रमा आफूले सोचेका, रणनीति बनाएका, ठूला योजनाहरु, साना कामहरु कत्तिको पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले त हामीले स्थानीय तहमा चारवटा गाविसलाई गाउँपालिका बनाएर तयार गरिसकेको अवस्था छ । हाम्रा कतिपय प्रशासनिक भवन थिएनन् । अहिले हामीले तीनवटा वडा कार्यलयहरु निर्माण गरिसकेका छौं भने यो वर्ष चारवटा वडा कार्यलय निर्माण गर्ने योजनमा छौं । जनतालाई सुलभ ढङ्गले सेवा दिने भनेको पहिलो कुरा उनीहरुलाई पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय स्थापन गर्नुपर्ने भएकाले हामी त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेका छौं । त्यसपछि हामीले यातायातको सुलभता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले सडकको डीपीआर गर्ने योजनामा जुटेका छौँ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका कटानबाट पनि पीडित भएको हुनले होला धेरै पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने, कल्भर्टहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले हामीले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा लागेका छौं । झोलुंगे पुलको पनि धेरै ठाउँमा आवश्यकता रहेको छ । तत्काल पुलहरु निर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा बालबालिका विद्यालय पठाउनु पर्ने कुरामा हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पुलहरु निर्माण गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश सरकारले दिइएको बजेटले यातायातको सुलभता बढाउनका निम्ति हाम्रो साबिक टाँडी र मधुमल्ला रमिते जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कुरामा हामी निरन्तर दिइराखेका छौँ । यसवर्ष १ करोड १० लाखबाट सडक कालोपत्रेको काम सुरु गर्नेगरि तयार गरेका छौँ । मलाई लाग्छ यो कार्यकाल भित्रमा हामीले कम्तीमा पनि प्रशासनिक भवन बनाएर सेवाग्रहीलाई आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने सक्छौं जस्तो लाग्छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । पर्यटकीय क्षेत्रमा के-कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ ?
पर्यटन बोर्डबाट चुलीपोखरी व्यवस्थापन गर्ने निम्ति केही स्रोतहरु उपलब्ध भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा हामी छौँ । मिक्लाजुङ र चुलाचुली गाउँ जोड्ने नुनसरी खोलाको किनारमा झोलुंङे पुल निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ पर्यटकहरुको आवगमन बढ्ने अवस्था देखियो भने त्यसबाट चुलाचुली सामूदायिक वन र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको साझेदारीबाट पदमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा कार्ययोजना बनाएका छौं । सँगसँगै हामीसँग ३ नं. वडामा भ्यू टावर बन्दै छ त्यसलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लागेका छौँ । ५ नं. वडामा एउटा पदमार्ग तयार गरेर त्यहाँको झरनामा जाने प्रक्रिया अगडि बढाइएको छ । मिक्लजुङ डाँडाबाट अवलोकन गरिने १ नं. प्रदेशका १४ वटै जिल्ला देखिने र हिमाल सहजै अवलोकन गर्ने सकिने, र्सूर्योदय देखिने सक्ने भएकाले केबलकार निर्माणका निम्ति हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदान पेश गरेका छौं । ऊर्जामन्त्री स्वयम् त्यो ठाउँको अवोलकन गरेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएका छ । होमस्टे जस्ता विभिन्न अवधारणहरु हामीले पर्यटकीय प्रवद्र्धनका लागि अगाडि सारेका छौं । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्रको बहस भइरहेको छ नि ?
पहिला पहिला राजनीतिक दलहरुले पुर्नसंरचना गरिरहँदा सम्झौता गरेअनुसार नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको हुदाँ विगतमा हामी निर्वाचन भएर आउँदा केन्द्रलाई मध्य भागतिर व्यवस्थापन गर्नपर्छ भन्ने कुराहरु उठेको थियो । तर मध्य भागतिर ज्यादै पूर्वाधार अभावको तथा जमिनको अभावले त्यो कुरा हुन सकेन । मधुमल्लामा भने धेरै पहिले देखि नै मान्छेहरुको आर्कषण बढेको तथा स्रोत साधन पनि भएको हुनाले केन्द्र त्यँहि होस् भन्ने सम्झौता भएको हो । भविष्यमा मध्यभागतिर पूर्वाधार भए सोच्न सकिन्छ । घरघरमा सेवा पु¥याउन तपाईंले के(कस्तो संयन्त्र बनाउनु भएको छ ।
हामी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सकेसम्म सुलभ ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेको अवस्था छ । हामी प्रशासनिक क्षेत्रहरुबाट पनि नागारिक नपाएका दुर्गाम ठाउँमा रहेका नागारिकता विहीनलाई विभिन्न शिविर सञ्चालन गरेर भए पनि नागारिकता उपलब्ध गराइएको छौं । भर्खरै हामी साबिक वडाको रमिते खोलामा शिविर सञ्चालन गरेर ८८ वर्षसम्मका एकजना जेष्ठ बुवा नागारिकता विहीन हुनहुँदो रहेछ, उहाँलाई नागारिकता प्रदान गरियो । यस्ता कामका लागि हाम्रो टिम तदाकरुकताका साथ जनतालाई, सुलभ सहज ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्न वातावरण बनाउने प्रयत्नमा लागेका छ ।
केही समय अगाडि केही ठाउँका जनप्रतिनिधिहरु सेवासुविधाको हिसाबले मिडियमा निकै आलोचित भए त्यो मामिलालाई चाँही मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ?
अहिले पनि तोकेको भन्दा बढि सेवा सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सोच हाम्रो छ । सकेसम्म त्यसलाई पनि मितव्ययी गर्नुपर्छ । सेवासुविधा लिनका निम्ति हामी त्यहाँ गएको होइन, एउटा स्वयंमसेवक बनेर जनताको सेवाका निम्ति हामी त्यहाँ गएको भन्ने भावना उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ सेवा सुविधाको विषयमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । हामी आगामी दिनमा पनि समूदायमा आलोचित नबन्ने सोचका साथ काम गर्ने प्रयास गर्छौँ ।